सकारात्मक परिबर्तन: युवाको नैतिक दायीत्व::Hamrodamak.com
- | पिपला ढुंगाना
हामी देश बदल्ने अाँट बोकेर दौडेको एक जमात।कति सक्षम छौँ त अाफ्नो कर्तव्य निभाउन ?
हामीले दैनिकी चलाउने सिलसिलामा कहाँ अनि कति अाफुलाइ इमानदार भएर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्यौँ? हो सोच्ने बेला अाएको छ। कसरी आफुलाइ इमान्दार बनाउने भन्ने बारे ।आजको समय ब्यस्तताको अर्को नाम भएको छ सहरमा। सडकमा हुने ट्राफिक जाम र धुलाम्मे सडक त हामी लाई आदत परिसकेको छ ।त्यो माथी पनि सडक भरि फालिने फोहोर त हामिले वास्ता गर्ने विषयभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने मा पनि शंका लाग्छ। समय जति नै बदलिए पनि हामीले आफू लाई नबदलेको खण्डमा परिबर्तन सम्भब छैन ।जसको निम्ति सकारात्मक सोच र पहल कदमी एउटा अपरिहार्यता हो।
एक देशको सफलता त्यो देश का मान्छेको गुणबाट देख्न सकिन्छ । सामाजिक परिवर्तनको लागि विशेष गरी युवाहरूको ठूलो भूमिका छ। युवाहरू राष्ट्रको भविष्य हुन् । युवा हरु परिवर्तनको एजेन्ट हुन । उनीहरूमा समाज लाइ परिवर्तन गर्न शक्ति छ।कुनै एक व्यक्ति नैतिकवान हुन लाई उसको व्यवहार सामाजिक मुल्य र मान्यता अनरुप हुनु पर्छ । सकारात्मक परिबर्तन एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई संघर्ष को रुप मा आउनु पर्छ । सुनौलो भबिस्व निर्माण को लागी सकारात्मक परिबर्तन युद्ध गरे जस्तै हो । सुरुवात अझै ढिला भएको छैन । के परिबर्तन को लागी तपाई युद्ध लड्न तयार हुनुहुन्छ ?